ဆိုင်မွန်(နည်းပညာ): ဖုန်းဘက်ထရီ အကုန်မြန်နေလို့ စိတ်ညစ်နေ ပါသလား ?
ဖုန်းဘက်ထရီ အကုန်မြန်နေလို့ စိတ်ညစ်နေ ပါသလား ?
ဖုန်း ဘက်ထရီ အားကို ကြာရှည် ခံစေမယ့် နည်းလမ်း ၁၀ ခုကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
၁။ ဘက်ထရီအား လုံးဝ ကုန်သွားတဲ့ အထိ မသုံးပါနဲ့။ အပြည့်လည်း မသွင်းပါနဲ့။ အခုခေတ်ပေါ် ဖုန်းတွေက Lithium Ion ဘက်ထရီတွေကို အသုံးပြု ထားပါတယ်။ ဒီဘက်ထရီ aတွက အားကို (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်း အပြည့်သွင်းဖို့ မလို သလို လုံးဝကုန်သွားတဲ့ အထိလည်း သုံးလို့ မကောင်းပါဘူး။ ဖုန်းကို ထိခိုက်စေ နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘက်ထရီ
အား အနည်းဆုံး (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက် အထိပဲ သုံးပြီး (၉၀) ရာခိုင်နှုန်း လောက် အထိပဲ အားသွင်းပါ။
၂။ အားသွင်း နေစဉ် ဖုန်းမသုံးပါနဲ့။ ဖုန်းအားသွင်း ကြိုးတွေ ဘာကြောင့် တိုတာလဲ စဉ်းစားဖူးပါလား။ ဖုန်းထုတ်လုပ် သူတွေက အားသွင်း နေတုန်း ဖုန်းကို မသုံး စေချင်လို့ဖြစ်
ပါတယ်။ ဒီလို အသုံးပြုမယ် ဆိုရင် ဖုန်းရဲ့အားသွင်း စနစ်ကို ထိခိုက်စေပြီး ဘက်ထရီ သက်တမ်းလျော့ သွားစေ ပါတယ်။ ဖုန်းတွေရဲ့ဘက်ထရီဟာ သတ်မှတ် ထားတဲ့ အကြိမ်ရေ သက်တမ်း ပြည့်အောင် အသုံးပြုပြီး သွားရင် အသစ် လဲပေးဖို့ လိုပါတယ်။
၃။ အလင်း အမှောင် အလိုအလျောက် ချိန်ညှိ စနစ်ကို မသုံးပါနဲ့။ သင့်ဖုန်းရဲ့ AMOLED မျက်နှာပြင်ဟာ ဘက်ထရီ အစားဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ Auto brightness စနစ်ကို သုံးတာက ဘက်ထရီ အားကို အကုန်မြန် စေပါတယ်။ လိုအပ်ရင် လိုအပ် သလောက် အလင်း အမှောင်ကို ကိုယ် တိုင် ချိန်ညှိပေးတာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ Vibrate နဲ့ အခြား အသံထွက် စနစ်တွေ ပိတ်ထားပါ။ သင့်ဖုန်းရဲ့ Vibrate တုန်ခါမှုက ရေရှည်မှာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင် ရုံသာ မက ဘက်ထရီလည်း အရမ်း စားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခလုပ်နှိပ်ရင် အသံမြည်အောင် လုပ်ထားတာ တို့လိုမျိုး စနစ်တွေကလည်း သုံးရတာ ဘက်ထရီ ကုန်တာက လွဲပြီး အခြား အကျိုး မရှိပါဘူး။
၅။ အခြား အမျိုးအစား အားသွင်းကြိုးနဲ့ ဘက်ထရီတွေ ၀ယ်မသုံးပါနဲ့။ အမျိုးအစား မတူတဲ့ အားသွင်း ကြိုးတွေ၊ ဘက်ထရီ တွေက သင့်ရဲ့ဖုန်း အားသွင်း စနစ်နဲ့ ကိုက်ညီမှာ မဟုတ်တာ အသေ အချာပါပဲ။ သက်ဆိုင် ရာအမျိုးအစားရဲ့ အော်ရီဂျင်နယ် တွေကိုပဲ သုံးပါ။
၆။ GPS၊ Wi-Fi နဲ့ Bluetooth တွေကို မသုံးရင် ပိတ်ထားပါ။ ဒီဟာတွေက အချိန်တိုင်း ဖွင့်ထားဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ သူတို့ကို ပိတ်ထား ရုံနဲ့ ဘက်ထရီကို ချွေတာနိုင်ပြီး ဖုန်းရဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်တာ တွေလည်း ပိုကောင်း စေပါတယ်။ ဒီစနစ် တွေက ဖုန်းကို လေးစေ တာကြောင့် လိုအပ်မှသာ ဖွင့်သုံးပါ။
၇။ မျက်နှာပြင် အလိုအလျောက် ပိတ်သွားချိန်(Screen timeout)ကို နည်းနည်းပဲ ထားပါ။ လေ့လာမှုတွေ အရ သာမန် လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့စမတ်ဖုန်းကို တစ်နေ့မှာ အကြိမ် (၁၅၀) လောက် ဖွင့်လေ့ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Screen Timeout ကို အချိန် နည်းနည်းပဲ သတ်မှတ် ထားရင် ဘက်ထရီ အကုန် သက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ (၁၅) စက္ကန့်လောက်ပဲ ထားပါ။
၈။ App တွေကို Wi-Fi သုံးပြီး မကြာခဏ Update လုပ်ပေးပါ။ စမတ်ဖုန်း တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ App တော်တော် များများက လစဉ် update လုပ်ပေးဖို့ လုပ်ပေးမယ် ဆိုရင် ဘက်ထရီအား နည်းနည်းပဲ သုံးပြီး အလုပ် လုပ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Update မဖြစ်တဲ့ Apps အဟောင်းတွေ ကတော့ သင့်ဖုန်းရဲ့ RAM နဲ့ ဘက်ထရီကို သုံးဖြုန်း ပစ်မှာပါ။
၉။ Auto-Sync စနစ် ကိုလည်း လိုအပ်မှ သုံးပါ။ သင့်ရဲ့ e-mail တွေကို မကြာခဏ update ဖြစ်ဖို့ လိုတယ် ဆိုမှ Auto-Sync စနစ်ကို သုံးပါ။ Auto-Sync စနစ်မ လိုအပ်တဲ့ အခြား e-mail Apps တွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ ကိုသုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ ဖုန်းခေါ်မယ် ဆိုရင် လိုင်းဆွဲအား ကောင်းမကောင်း စစ်ဆေးပါ။ ဖုန်းလိုင်း သိပ်မမိ တာမျိုးက သင့်ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီ အားကို ပိုသုံးပြီး လိုင်းရှာ ရစေ ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လိုင်းသေချာ မိတဲ့ နေရာမျိုးက ဖုန်းခေါ်တာတို့၊ လိုင်းမမိတဲ့ နေရာမျိုးမှာ Airplane mode လုပ်ထား တာမျိုးက ဘက်ထရီ အကုန်သက်သာ စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၁။ မလိုအပ်ပဲ process တွေကို ရှင်းလင်းပါ စမတ်ဖုန်းတွေမှာ မလိုအပ်ပဲ နောက်ကွယ်မှာ အလုပ် လုပ်နေတတ်တဲ့ processes တွေနဲ့ App တွေ ရှိတတ် ပါတယ်။ ဒီဟာတွေကို Setting > Apps ထဲမှာသွားပြီး Force stop လုပ်ပြီး ရှင်းပစ်လိုက်လို့ ရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ဒီ processes တွေရှင်း တဲ့ Apps တစ်ခု ခုသုံးနို င်ပါတယ်။
Original link - http://www.aungsanlin.com/
Posted by Te Tee at 8:26:00 PM